PCB nzukọ Ike - SHENZHEN KAISHENG PCB CO., LTD
PCBFuture na-enye ndị ahịa anyị ntụkwasị obi Turnkey PCB nzukọ ọrụ na-eweta ezigbo mma nsonaazụ na asọmpi ahịa. Otu-akwụsị PCB nzukọ ọrụ gụnyere PCB n'ichepụta, Components sourcing, PCB nzukọ na Ule. Dị ka onye na-eduga ụlọ ọrụ mgbakọ sekit na-ebipụta akwụkwọ, anyị nwere ọpụrụiche na elu ugwu na site na mgbakọ oghere, usoro anyị niile na igwe anyị ahaziri iji mepụta atụmatụ, nkọwapụta na olu nke ọrụ nzukọ eletrọniki gị.
Anyị nwere ikike dị elu maka mgbakọ PCB, na oke nkenke SMT mmepụta sitere na Germany, Japan na wdg. Ndị ọrụ injinia anyị bụ ndị ọkachamara ma nwee ntụkwasị obi zuru ezu iji lekọta DFM, injinia, mmepụta na ule. Anyị kasị ike nnyefe turnkey PCB electronic na otu izu.
Ihe PCB chọrọ
Nta kacha nta: 10mm x 10 mm
Max size: 500mm * 800mm
Isiike, Flex, isiike-Flex, Metal Base
HASL Lead or Lead free, ENIG, Im Silver, OSP, Gold plated, wdg
Dị ọ bụla
5 nde isi kwa ụbọchị
1 mpempe na 500,000 PC
Single na abụọ kwadoro SMT / SMD
THT (site na nchịkọta teknụzụ oghere)
SMT & site na mgbakọ oghere
Obere ibe Chips
Ebute ndu na-erughị ala
Mikroskopu na 20X
AOI (Nnyocha nyocha anya akpaaka)
Ndu Ndu Uwe-Kfuru
Tree ma ọ bụ tube
Akuku uzo na agba ohu
Gerber faịlụ ma ọ bụ imepụta faịlụ
BOM Ndepụta (Bill nke Materials)
Họrọ ma debe faịlụ ma ọ bụrụ na ị nwere
Nweta PCB Assembly Quote:
PCB Assembly eri gụnyere PCB Manufacturing na-eri, mmiri na-eri, PCB nzukọ / Testing na-eri. Iji nweta nkọwa ziri ezi, biko zipụ faịlụ Gerber gị, ndepụta BOM, ihe ndị ị chọrọ imepụta na oke achọrọọrịre @pcbfuture.com . Anyị ga-alaghachikwute gị site na nkwuputa ọrụ n'ime ụbọchị 2.